Fahatongavan'ny Papa: Ahoana ny arofenitra?
samedi, 07 septembre 2019 10:12
Araky ny efa nambara tamintsika teto ihany, ny Fiangonana Katolika dia manana rafitra ifotony. Izay ny Diosezy no fitsinjaràny (mitovitovy amin'ny Faritra na Région eto amintsika).
Ny Eveka no ambony indrindra raha ny an-tanatohatra no resahina, ny Papa izany dia Evekan'i Roma, any ny Dioseziny, ny Kardinaly koa dia Eveka, ary manana ny Dioseziny ihany koa izy, mpiara-miasa akaiky ny Papa ny Kardinaly, ary azo fidiana ho Papa raha latsaky ny 80 taona, ary mifidy Papa raha misy tsy maha eo intsony ny Papa, izay mandat à vie, raha tsy hoe miala izy toa an'i Papa Benoit XVI.
Ny antsika Malagasy, ny Kardinaly Désiré Tsarahazana dia Evekan'ny Diosezin'i Toamasina, izy moa dia sady Arseveka ihany koa, izany hoe mandrindra Diosezy maromaro, antsoina hoe Archidiocèse any amin'ny faritra no antsoina hoe Arseveka.
Mgr Odon Razanakolona kosa no Arsevekan'Antananarivo. Eto amin'ny Arsidiosezy Antananarivo ny Papa no tonga, dia ny Arseveka Mgr Odon Razanakolona izany no tompon'andraikitra eto, ka izy no mandray ny Papa, tsy miditra eo ny Kardinaly satria tsy eo amin'ny Diosezy iandraketany.
Ny Papa tsy afaka mibaiko an'i Mgr Odon Razanakolona eto, satria any Roma ny Dioseziny, fa amin'ny mahalehibe azy amin'ny an-tanatohatra indray, dia omen'i Mgr Odon Razanakolona azy ny fahefana eto, ka na ny fitarihana ny lamesa lehibe atao aza, dia atolotry ny Eveka an'Antananarivo ny Papa ny fitarihana azy, fa izy no eo akaikiny hatrany, eo izany dia hitondra Tehina ny Papa, ka atodiny amin'ny vahoaka ilay boribory amin'ny Tehina, ilazany fa izy no manana ny fahefana eo amin'ny fitarihana.
Misy anefa ny antsoina hoe "Primauté pontificale", izay fanekena eo anivon'ny Fiangonana Katolika, fa ny Papa no dimbin'ny Masindahy Piera, Filohan'ny Fiangonana Katolika, ka manandanja izay amin'ny finoana, sy amin'ny lalàna Katolika.
Ny Kardinaly Désiré Tsarahazana kosa no lehiben'ny Fivondronam-ben'ny Eveka amin'izao, izay tsy voatery ny Kardinaly hatrany io lehibe io, dia misy ny fandaminana ny fahatongavan'ny Papa avy amin'ny Fivondronam-ben'ny Eveka, ka tsy afaka anao didy kofehy lehibe eto amin'ny Dioseziny ny Evekan'Antananarivo.
Misy hatrany moa ny fifampidinihan'izy ireo, satria ny Papa no lehiben'ny Eveka, sy manendry azy ireo amin'izay Diosezy tiany an-defasana azy maneran-tany. Izay no mahatonga misy Eveka vahiny maro eto amintsika, satria ny Fiangonana Katolika dia iray maneran-tany.
Ady hevitra hafa moa ny hoe, nahoana no tsy Malagasy avokoa no tendrena Eveka eto Madagasikara, fa nahoana no misy vahiny, nefa isika Malagasy tsy misy tendrena any ivelany. Fahefan'ny Papa izay fanedrena izay, ary manana ny safidy fampiombonana ny mpino Katolika maneran-tany izy amin'izay.
Ny Eveka dia manao samboady sy satroka voloparasy, ny Kardinaly kosa manao samboady sy satroka ary akanjo mena.
Misy ny "maître de la cérémonie", miandraikitra ny arofenitra, izy no miantoka ny fizoran'ny fandraisana, izay efa voafaritra isa-minitra, tsy misy eto izany ny programa tsy voafaritra mialoha. Izy no mandrindra aiza no hipetrahan'ny tongotry ny Papa, aiza ny toeran'ireo manam-pahefana, ny mpanao gazety...
Manana ny mpiaro azy manokana ny Papa amin'ny maha filoham-panjakana azy, ka tsy azon'iza na iza idirana ny faritra manodidina ny Papa, raha tsy amin'ny fotoana sy toerana efa voarakitra anaty programa voatondro mialoha.